Isazoqhubeka nokulwela amawini iSundowns kweyeCAF - Impempe
Isazoqhubeka nokulwela amawini iSundowns kweyeCAF
March 17, 2021 Impempe.com
ULebohang Maboe weMamelodi Sundowns
Akenelisekile ngokugcwele Isazoqhubeka umqeqeshi weMamelodi Sundowns, uManqoba Mngqithi yize iqembu lakhe libe elokuqala ukuzibekisela indawo kwi-quarter final yeCAF Champions League ngenuva kokwehlula iTP Mazembe ngoLwesibili eLoftus Stadium.
ISundowns iwunqobe ngo 1-0 wegoli likaLebohang Maboe umdlalo womlenze wesibili ekubeni owokuqala iwunqobele ekuhambeni ngo 2-1.
Yize kubukeka kuyinto enkulu lokhu kodwa uMngqithi uthi akukho okuyisipesheli asebekwenzile ngoba basafake iqembu kwi-quarter final kuphela okuyinto ejwayelekile kwiSundowns.
Akajiki ekutheni imidlalo emibili esele ufuna amawini amabili kuyona ukuze nabaphathi bezobona ukuthi ukuzinikela kwabo eqenjini akuweli phansi.
IDowns isalelwe umdlalo we-Al Hilal ekhaya ngo-Ephreli 2 noweCR Belouizdad ngo-Ephreli 9 ekuhambeni.
“Ngifuna amawini amabili kule midlalo esele,” kusho uMngqithi ngenuva komdlalo wangoLwesibili.
“Abaqeqeshi engisebenza nabo basebenza ngokukhulu ukuzikhandla kanti nabaphathi baseseka ngakho konke esikudinga kubo, ngakho-ke ngeke sone yonke le nto enhle eyenzekayo ngokudelela umgqigqo ngoba sibuswa ukuthi sesivele sisesigabeni esilandelayo.
“Akukho lutho olutheni esesilwenzile ngokufaka iqembu kuma-quarter final ngoba iSundowns ikwenza minyaka yonke lokho,” kusho yena.
Mayelana nomdlalo wangoLwesibili uMngqithi uthi isiwombe sokuqala besingelula kodwa abadlali bakhe basemuva agqamise kubona uRivaldo Coetzee, Mosa Lebusa noRushine De Reuck bakuthambisile lokhu.
“Nakuba besenza amaphutha abengaba yingozi kithi esiwombeni sokuqala, kodwa ubungozi beMazembe besibugade bonke ngaso sonke isikhathi.
“Kwalawo maphutha besiwenza engxenyeni enkulu yabo. Kude namapali ethu. Siyazi ukuthi iMazembe inabadlali abade ngakho besiligcina ngakithi ibhola ngaso sonke isikhathi ukugwema ukuthi basebbenzise ukululeka kwabo.
“Bonke abadlali bami basiphakamisile isandla namuhla uma uzokhumbula ukuthi besidlala nelinye lamaqembu ahlonishwayo e-Afrika,” kusho yena.
Umile uMngqithi ekutheni akenelisekile okugcwele ngokuthi sebekwi-quarter final.
“Kuhle konke okwamanje kodwa siyithimba labaqeqeshi sikuqonda kahle ukuthi kunezinto okusamele sizilungise eqenjini.
“Kusemqoka ukunqoba le midlalo emibili esele ukuqhuba umgqigqo wethu ngoba uma singavuma ukuhlulwa kuyo, laba esizobhekana nabo emzuliswaneni olandelayo bangakhushukelwa ukuzethemba ngoba bebuswa ukuthi kanti siyashayeka ngakho-ke ngijabule kodwa ngiyazi ukuthi umsebenzi usemkhulu kwiChampions League.
“Asikwazi ukuvele sivume nje ukuthi sishaywe ngoba lokho kunomthelela ongemuhle. Uma kusawineka qhubeka uwine ngoba ukushaywa kuvula nokuzingabaza kubadlali.
“Angifuni ukushaywa futhi angizenzisi yingakho le midlalo emibili esele kufanele siyinqobe kumnyama kubomvu,” kusho uMngqithi.
Kulo mdlalo umshini wamagoli weSundowns, uPeter Shalulile uthole ikhadi eliphuzu elimkhipha ngaphandle komdlalo olandelayo kanti noKermit Erasmus ubengadlali ngoba elimele.
Previous Previous post: Isizolwela amaphuzu amane iChiefs kwesele kwiCAF
Next Next post: Ngabe kukhona abanye abazolandela uNtshangase bakhonjwe indlela eNaturena?